တောင်ဗျင်ရောက် ရွှေဟင်းတာယေးများ …. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » တောင်ဗျင်ရောက် ရွှေဟင်းတာယေးများ ….
တောင်ဗျင်ရောက် ရွှေဟင်းတာယေးများ ….
Posted by etone on Apr 6, 2013 in Community & Society, Events/Fundraise, Food, Drink & Recipes, Hobbies & Games, My Dear Diary, Relationships & Family | 41 comments
etone ဘ၀ တစိတ္တပိုင္း မန္းေလး ဂြဇတ္ အယက္သမား သက္မတ္ဂ
Mandalay Gazette ကြောင့် အမျိုးမျိုးသော လုပ်ငန်းခွင် အသီးသီးမှ ၊အလွှာစုံ ၊ အသက်ရွယ်စုံ ၊ ရောင်သွေးစုံ ဝါသနာ စုံလူများကို အပြင်လောကမှာပါ ရင်းနှီးခွင့်ရခဲ့ပါတယ် ။ မကြာခဏဆိုသလို တွေ့ ဆုံပွဲတွေလုပ်ကြတယ် ။ အလျဉ်းသင့်သလို တွေ့ဆုံခဲ့ကြတယ် ။လက်လှမ်းမှီသလောက် အလှူလေးတွေလည်း စုပေါင်းပြီး လုပ်ခဲ့ကြတယ် ။ ရန်ကုန် ၊မန္တလေး ၊ နေပြည်တော်နှင့် အခြားနယ်မှ လူတွေ လာတိုင်း အလျှင်းသင့်သလို တွေ့ဆုံပွဲတွေ လုပ်ကြ ဧည့်ဝတ်ပြုကြနဲ့ နွေးနွေးထွေးထွေးရှိခဲ့ကြတယ် ။ ပြည်တွင်းက လူတွေတင်မကပဲ ၊ ပြည်ပမှ ပြန်လာသူတွေအထိပါ အလျဉ်းသင့်သလို ဆုံကြတဲ့အခါ ၊ တခါမှ မဆုံခဲ့ကြဖူးပေမယ့် စာတွေရေးကြ ၊ ကော့မန့်တွေပေးကြနဲ့ နောက်ပြောင်းရင်း ငယ်ငယ်က ခင်ခဲ့ဖူးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေလို ပြောမနာ ဆိုမနာ ဆက်ဆံရေးမျိုး ရှိခဲ့ကြတယ် ။ တကြိမ်ထက်ပိုပြီး အခေါက်ခေါက်တွေ့ ဆုံဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့အခါ အချင်းချင်းကြား ရင်းနှီးမှုတင်မက သံယောဇဉ်ပါဖြစ်ခဲ့ကြတယ် ။ ဒါကြောင့်လည်း ရွာထဲ သာရေး နာရေး တစ်ခုခု ရှိပြီဆိုလျှင် ၊ အားလုံးက တက်ညီ လက်ညီရှိခဲ့ကြပါတယ် ။
Mandalay Gazette ကျေးဇူးနှင့်တွေ့ ဆုံခွင့်ရခဲ့လို့ … မကြာခဏစုပြီး စားကြသောက်ကြလုပ်ကြရင်း ဝါသနာ တူသူလေးတွေ အများကြီးရှိတာ တွေ့ခဲ့ရပြန်တယ် ။ ဝါသနာ တူသူတွေအတွက် နောက်ပြောင်ပြီး အပျော် အသင်းဖွဲ့လေးတစ်ခု ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြန်တယ် … အရက်သမား သမဂ္ဂအဖွဲ့ရယ်လို့ နာမည် ပေးခဲ့ကြတယ် .. .. အသင်းဖွဲ့တွေ ၊ ပါတီတွေ ထောင်တာ ခေတ်စားနေတဲ့ အချိန် .. အားကျမခံ နာမည်တစ်ခုကောက်တပ်ပစ်ခဲ့တာ … အရက်သမား သမဂ္ဂပါ … ။ အခုဆို နောက်နောက်ပြောင်ပြောင်နဲ့ အကြောင်းရှာ နာမည်ပေးခဲ့တဲ့ရက်လေး ကျော်လွန်ခဲ့တာ တနှစ်တောင်ပြည့်ခဲ့ပါပြီ ။
သောက်တတ်စားတတ်တဲ့ လူတွေထဲက ခရီးထွက်ဖို့ အဆင်ပြေတဲ့ လူတစ်စု ချောင်းသာကမ်းခြေကို ပထမဆုံး ခရီးစဉ်အဖြစ် စသွားခဲ့ကြပါတယ် ။ ခရီးစဉ် စလို့ ရန်ကုန်က ထွက်ခဲ့တာ မတ်လ 25 ညမှာပါ ၊ အချို့သော လူတွေလည်း အကြောင်းကြောင်းကြောင့် 25ရက်ည လိုက်ဖို့ မဖြစ်တဲ့အခါ 26မနက်မှာ လိုက်လာကြပါတယ် ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မတို့ တွေ 26 ညနေ ချောင်းသာကမ်းခြေမှာ ဆုံဖြစ်ခဲ့ကြတယ် ။ အရက်သမား သမဂ္ဂရဲ့ နှစ်ပတ်လည်လို့ မရည်ရွယ်ပါပဲ …. အကြောင်းပြချက်ပေးပြီး နှစ်ပတ်လည်လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်သောက်စား ခဲ့ကြပါတယ် ။ အစကတော့ သွားဖို့ ရည်ရွယ်သူ နှစ်ယောက်တည်းပါ … သူတို့ နှစ်ယောက် အစီစဉ်ကို တယောက်ပြီးတယောက်ကြားရင်း … အခုလို တစုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ် ။ peak season ဖြစ်တာကြောင့် ဘွတ်ကင်ကြိုတင်ထားတာမျိုးမရှိတော့ ကားလက်မှတ်က အစ ၊ အခန်းရဖို့ အထိပါ ဒီလူအကုန်စာ စီစဉ်ဖို့ ခက်ခဲခဲ့ပါတယ် ။ ရှားရှားပါးပါး ဘွတ်ကင်တင်ထားတဲ့ အခန်းတွေ သူများဈေးပိုပေးလို့ ကိုယ်တွေ ဖြုတ်ချခံလိုက်ရတာမျိုးလည်း ကြုံခဲ့ပေမယ့် …နောက်ဆုံး အဆင်ပြေပြေနဲ့ ….. အခုလို အရက်ဝိုင်းလေး ဖန်းတီးနိုင်ခဲ့တဲ့အခါ ၊ စိတ်ပင်ပန်းခဲ့ရတာတွေက ဘာမှ မပြောပလောက်တော့သလိုပါပဲ ။ ကြုံတောင့်ကြုံခဲ ရွာသူ/သားတွေ စုသွားဖြစ်ခဲ့တဲ့ အပျော် ညအိပ် ခရီးစဉ်လေးကတော့ .. ဘဝမှာ မှတ်မှတ်ရရ ရှိနေတော့မှာပါ ။
(ဓါတ်ပုံထဲ ပါသူအားလုံးကို ရွာထဲပို့စ်တင်ဖို့ ခွင့်ပြုချက်တောင်းပြီးပါပြီ )
အူးကျောက်ကလည်း တကူးတက ဟောင်ကောင်ကနေ … ဘဲကင်တစ်ကောင်ကို အပွန်းပဲ့မရှိအောင်သယ်ခဲ့ပါတယ် ။ အူးကျောက်ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ လူစုံသွားအောင် လိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ … သောက်ဖော်သောက်ဖက်တွေကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
Double Black တလုံး စပွန်ဆာ ပေးပါသော ခြင်္သေ့ မြို့တော်က ရွာသူ မမခိုင်ဇာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
ချွေဟင်သာ တစ်ကောင်လောက် ဖမ်းချင်လို့ ဘာ။
ဦးထုတ်နဲ့ ချွေဟင်သာမလေး ဖမ်းပေးပါ။
ဒီတခါ နာမည်တွေရော လူတွေပါ ဖော်မှာပါလေးလေး
ဆက်လက် ကြာရှည်စွာ တည်ပါစေကြောင်း
နောက်နောင်လဲ ဒီလိုပွဲမျိုး ဆက်လက်လုပ်နိုင်ပါစေကြောင်း
မိုက်ထှာအေ … ပျော်စရာကြီးးး
သူရို့ ကျိပီး ကျုပ်တောင် ပျော်တွားဒယ် …
ဂယ် .. ဂယ် ..
အဟွတ် … ပေဆောင်ဆောင်နဲ့လည်ပြန်ကြည့်နေတာ ဘယ်သူပါလိမ့်
နောက်တစ်ခေါက်အတွက် အားတင်းထား တယ်
အဟမ်း.. စာမွဲလေးရက်ဖြေရလု့ိ ရုံးပျက်တဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပဲ အပြစ်တင်ရမလား…
အလုပ်တွေများတယ်ဆိုပြီး ခွင့်မပေးတဲ့ ရုံးကလူကြီးကိုပဲ အပြစ်တင်ရမလား…
ဘာပဲဖစ်ဖစ်… သူတို့ကိုကြည့်ပီး ပျော်ဒယ်… ချွေဟင်းတာမဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ် ချိတ်မကောင်းဝူး..
သောင်ပြင်မှာ နည်းတဲ့လူတွေ မဟုတ်ဘူး ။
တော်တော် စည်တာပဲ ။
တနှစ်တောင်ပြည့်ပလား။ ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ဒီပါတီလေးအဓွန့်ရှည်ပါစေကြောင်းဆုတောင်းပါတယ်။ သမဂဝင် ဒွေလူမစုံဘူးပဲနော့။ နောက်နှစ်ပါတ်လည်ကျတော့လူစုံပါစေကြောင်းထပ်လောင်းဆုတောင်းပါအိ။
ပုံတွေကြည့်ပြီး သမဂ္ဂ ဝင်ချင်လာပြီ။
နောင်နှစ်အတွက် အခုကတည်းက သောက်တာ ကျင့်ထားမယ်။
အန်တီမမရေ ဘာပဲသောက်တတ်တတ် သောက်တတ်တယ်ဆိုကတည်းက ဝင်နွှဲလိုရပြီ
ဘာလို့လဲဆိုတော့ အခုဝိုင်းထိုင်နေတဲ့အထဲမှာ ဟန်ပြခွက်ကိုင်ပြီး နှူတ်ခမ်းနဲ့ထိလိုက် ပြန်ချလိုက်လုပ်ပြီးေရတွေလှိမ့်သောက်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်ရှိလို့ပါ
ကျုပ်ကိုလည်း အဲ့သမဂ္ဂထဲ ဝင်ခွင့်ပေးဘာဗျာ..။
ဥက္ကဌရှိရင်လာဘ်ထိုးခ.. ချိဗတ်စ်.. တိုက်ပါ့မယ်..။
ဟိုလူ အူးကမ်းဂျီး.. ဟင်္ဒါရွှေအိနားလေးပဲ ကပ်နေပါ့လား။
ပက်ထရစ်ရွှေဂေါင်း … ဒဲ့ …
အိန်းဂျီး ချွတ်ပြ ……
တုံကလေးရေ ဒါ့ပုံတွေကြည့်ပြီး အပျော်တွေကူးစက်လာသလိုပဲ သတိရပါ၏ နောက်လည်းတွေ့ချင်ပါ၏
လိုက်ချင်လိုက်တာ ဂယ်ပဲ မကြုံလိုက်ရတာနာတယ် နောက်နှစ်တွေဆိုကြိုးစားမယ်
ဒီနှစ်တော့ ရွှေဟင်္သာတို့နဲ့ ကိုချောင်းသာကိုမလိုက်ရတော့ ညီမလေးညောင်ချောင်းသာနဲ့ပဲ ကြေနပ်ရတော့တယ် ဟဲဟဲဟဲ
ကိုယ်ရေးတာမပါပဲ comment အခု ငါးဆယ်ပြည့်လျှင် နာမည်တွေဖော်ပေးပါမယ် …. ခိခိ သဂျီးတော့ ညက်ခုံးလှုပ်နေဘီ
အရင်တုန်းက ဖတ်ခဲ့တဲ့ရွာနဲ့တော့ ကွာခြားလာတာအမှန်ဘဲ
ဟိုးတုန်က ရွာသူားတစ်ဦးရဲ့ ဓာတ်ပုံတင်ဖိုဆိုတာ ကျားမြီးပြေးဆွဲလိုက်ထက်တောင်ခက်ဆိုဘဲ။
လူငယ်တွေ ပျော်ခွင့်ရတုန်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပျော်ကြတာ သဘောကျတယ်။
အဲလိုအခွင့်အလမ်းမျိုးက တသက်လုံး အမြဲမရနိုင်ဘူးလေ…။
တိုင်းပြည်ကြီးပြောင်းသွားတဲ့အထဲ.. မန်းဂဇက်က အုပ်၁ဝချပ် သဲအပွင့်တရာစာလောက်ပါပါတယ်..
အရင်က.. မြန်မာပြည်သူသားတွေ.. အင်တာနက်ဂျီမေးလ်ဖေ့ဘုတ်မကြည့်နိုင်ခင်မှာကို.. မန်းဂဇက်ကို.. မြန်မာပြည်ထဲက.. တိုက်ရိုက်ဖွင့်ကြည့်နိုင်ခဲ့တာ..
အဲဒီတုံးက.. ရွာသူားတွေမထိခိုက်အောင်….သတင်းတွေ.. အာဏာပိုင်တွေမငြိုညင်အောင် ထိန်းညှိတင်ခဲ့ရတာပေါ့..
အခုတော့.. ပုလင်းထောင်ပြ. ပြောင်ပြပြီပေါ့…။
နင့်မသောက်နိုင်.. နင့်အမျိုးတူကို.. တယောက်ထဲဝယ်သောက်ပစ်မယ်..
အန်ကယ်ကျောက် အိုက်ဒီယာ ဗရာကျော်နဲ့ချိတ်စ်က ဆွိရဲ့ ဒေါ်ဘယ်ဘလက်နဲ့ အတော်လေး အစပ်အဟပ်မိတာ တော်ရေ :harr:
ရှလွှတ် .. ရှလွှတ် … လျှာပေါ်တင်လိုက်တာနဲ့ …..စိတ်အာရုံတွေ နိုးထပြီး ၊ စွဲစွဲလမ်းလမ်း ဖြစ်သွားစေလောက်တဲ့… အရသာမျိုး …. ပြန်တွေးတိုင်း … ဂလု . . ဂလု …
“ကြေးအိုး” ထဲမှာ ” ကျောက်တုံး” ထည့်တော့ လက်က “တုန်” နေ၊ ” နွယ်” လို အရွက်စိမ်း ကို တစ်”စည်”ပိုင်း ထည့်ရင်ဖြင့် “ကမ်း”ကုန်အောင် “အိ” သွားမှာမို့ “အမယ်မင်း” လို့ အော်ပြီး ” ခြောက်မျက်နှာ” လှည့်ကြည့်တော့ “သု” လက်မှာ တက်တိုး လေးနဲ့။
” “သု” လက်မှာ တက်တိုး လေးနဲ့ ”
ကျန်တာတွေက ၊ နားလည်ပါတယ် ။
“သု” က ဘယ်လိုဖြစ်သွားရတာတုန်း ။
အရီးရယ် ဟုတ်တော့မလိုလိုနဲ့ …….. တွတ်ဖြစ်သွားတယ်
ကိုအဘရေ တက်တူး ကို တက်တိုး လုပ်မိထားလို့။
ရွာထဲက တက်တူး ခရေဇီး တစ်ယောက်လို့ ထင်တာဘဲ။
တုံတုံ ရေ့နောက်ဆုံးတစ်ယောက်က ရမ်းတီးထားတာ။
တွဲဖက် တစ်ယောက်ကို မှန်နေမင့်ဟာကို။
ဟို အာမေဋိတ် မူပိုင်ရှင်ဟာရော။
ဟီး။ သိသွားရင် တိတ်တိတ်လေးနေနော်။
အရီး ရဲ့ တောက်စ် စီဒီ လေး။
တုံးလိုက်တဲ့ ငါဟဲ့။အတွဲပဲ့ နေတာ သတိမေ့ခဲ့တယ်။
အဲဒီ တက်ထူး က ဝင်ပြီး လွှမ်းသွားတာ။
ဘိုင်သဝေး တိတွားဘီ .. ကျေးကျေးအရီး
Mozzarella Cheese နဲ့ ဗယာကျော် အတော်အတွဲမိတယ်…
ခုတော့ အသက်ကြီးမှဝက်သက်ပေါက်တဲ့ ဦးကျောက်…
သက်ဆိုင်သူက အရက်ကိုဖြတ်မလား သူ့ကို ဖြတ်မလားတဲ့…
နားလည်ပေးကြပါကွယ်…. အား ဟင့်
အာ .. အူးယေး … ဦးးးးးးးးးးးးးးး ကြောက် မွှားယို့ … အူးကျောက် ….
ဒါမဖြစ်သင့်တာပဲ … အိုက် ခေတ်က ကုန်တွားဘီ အူးယေးရဲ့ …. :om:
ယောကျာ်းတစ်ယောက်ကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ဆုပ်ကိုင်ထိန်းချုပ်ထားတာ ထက်စာလျှင် …သူ့အကြိုက် ကိုယ့်အကြိုက် နှစ်ဖက်မျှတွေးနားလည်မှုပေးတဲ့ ဆက်ဆံရေးမျိုးကမှ … ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမလားပဲ … ။
ဟိုလေ ..အူးလေးရယ် … ငယ်ငယ်က မိဘက ဒါမလုပ်ရဝူးဆိုလျှင် မိဘလစ်တဲ့ အချိန် နှစ်ဆတိုးပြီး လုပ်သလိုပေါ့လေ … ခုလည်း နှစ်ဆတိုးသောက် …အဲအဲ …
နာတိတာ တစ်ယောက်မှ ပါဘူး
ဆိုး တာ ကွာ
တစ်ဂေါင် ရေထဲကျ ဆိုလို့ …. တကယ့်ကို တကောင်ရေထဲကျသွားတာ (ကြောင်ကျကျတာ ) … ခါးလည်လောက်ပဲရှိတဲ့ ရေပေမယ့် လှိုင်းကြီးလို့ မြုပ်သွားပြီး … လူလည်းအတော်မွမ်းသွားတယ် … မနွယ်ပင်နဲ့ ဟိုကိုယ်တော် အမြန်လာထူပေးပေလို့ပဲ … ။
အီးတုံး ငမူး ငတုံး …. ဘလက်လေဘယ်လ်ကို တခါသုံး ပလပ်စတစ်ခွက်နဲ့ သောက်ရသလား… မသောက်ဘူးရင် မိုက်ကယ်ဂျော်လကီအောင်ပုကိုမေးကြည့်… ဒင်းဆို ဝီစကီဖန်ခွက် ကြွတ်ကြွတ်အိပ်စွပ်သောက်တာ… (ဖန်ခွက်မဆေးရအောင်တဲ့) :buu:
အူးကြောင် ဘွပုအကျံဂေါင်းပေမယ့် …. ကြွတ်ကြွတ်အိတ်တွေ .. မသုံးရတော့ဝူးလေ … . ။
ကိုယ့်အား ကိုယ်ကိုး ပြီး နောက်တစ်ခါဆို လက်ခုပ်ထဲထည့်သောက်ပါမယ် … ခိခိ …. ။